I-Dts kunye ne-Nestle zigcina ubudlelwane obuhle bokusebenzisana iminyaka emininzi. | Shandong Dingtaisheng Oomatshini Technology Co., Ltd.
I-Dts kunye ne-Nestle zigcina ubudlelwane obuhle bokusebenzisana iminyaka emininzi.
Ngo-2008, i-dts yanikezela nge-sterilizer yokuqala ejikelezayo yamanzi kwi-nestle qingdao mveliso e-china ukuvelisa ubisi olunamanzi enkonkxiweyo. Isuse ngempumelelo uhlobo olufanayo lwezixhobo ezenziwe eJamani. Ngo-2011 i-dts yanikezela iiseti ezili-12 ze-dts-18-6 ze-rotary sterilizers kwi-jinan yinlu (umthamo we-600cpm) kwimveliso ye-congee exubekileyo.
Ngo-2012, ii-dts zabonelela ngeeseti ezili-10 ze-dts-16-6 zamanzi zokutshiza amanzi kwi-hubei yinlu (umthamo we-1000cpm) kwimveliso ephambili yekofu enkonkxiweyo (nescafe) kwi-yinlu-joint venture yinlu.
Ekupheleni kuka-2012, ii-dts zazibonelela ngeeseti ezi-6 ze-dts-13-4 zohlobo lwe-sterilizers ze-xiamen yinlu (umthamo we-600cpm) kwimveliso ephambili ye-nescafe enkonkxiweyo kunye nobisi lwamandongomane.
Kwi-2013, i-dts ityikitye isivumelwano esidibeneyo sophando kunye ne-nestle beijing r & d yokuphuhlisa imveliso entsha enkonkxiweyo (i-congee yangoko kwisitya) unyaka omnye.
Ngo-2014, ii-dts zabonelela ngeseti yesitrayikhi esizenzekelayo se-xiamen yinlu (umthamo we-1200cpm) kwimveliso ephambili ye-nescafe enkonkxiweyo kunye nobisi lwamandongomane. Le nkqubo ibandakanya ii-4 zokuhambisa amanzi kwi-dts-18-6, ukulayishwa okuzenzekelayo kunye nokothula oomatshini bebhaskithi kunye nabahambisa iimpahla.
Ngo-2015, ii-dts zabonelela ngeeseti ezili-10 ze-dts-14-4 zamanzi okutshiza i-xiamen yinlu (amandla e-1000cpm) kwimveliso yeti ye-herbal.
Ngo-2016 i-dts yanikezela iiseti ezi-6 ze-dts-18-6 ze-rotary sterilizers kwi-jinan yinlu (umthamo we-600cpm) kwimveliso ye-congee exubekileyo.
Ngo-2019 inokuba i-dts ibambisene nomzi mveliso we-turkey gonenli nestle oem ngempumelelo kwaye sele ibekiwe kwimveliso.
Ngo-2019 u-septemba dts asebenzisana ngempumelelo ne-sri lanka ceylon isiselo nestle oem mveliso ngempumelelo.
Ngo-2019 u-dts usebenze kunye ne-malaysia nestle nihong mveliso ngempumelelo.